Ama-coelenterates ama-marine colonial, noma amakhorali, ngokuyinhloko avela ekilasini lama-corp polyps, kancane kancane - ukusuka ekilasini lama-hydroids (eyaziwa nangokuthi i-hydrocoral), abe nekhono elihlukile lokwenza i-skeleton enamandla, ngokuvamile i-calcium carbonate (calcareous), engavamile neze-horny. Amasipha awakhiwe ngemva kokufa kwesilwane agcinwa futhi akhuthaze ukwakheka kweziqhingi, ama-atolls, izigodi.
Kuwo wonke ama-coral awaziwayo, okubaluleke kakhulu ekubukeni kwezinto eziphilayo kuyimimoya yamatshe, abizwa nangokuthi ama-madreporous, ngoba ukukhula kwala ma-corals okwenzayo futhi kwakha izigodi zama-coral neziqhingi. Amakhorali anamatshe atholakala kuphela emanzini asezindaweni ezishisayo nasezindaweni ezishisayo, ekujuleni kwamamitha angaba ngu-30, ngokushisa kwamanzi cishe okungama-21 ° C. Ngokuyinhloko, wonke ama-coral colony ane-single-toned skeleton, kodwa futhi kwenzeka ukuthi kwamanye ama-colonies ama-shades avela kumbala okhanyayo kuya kumnyama-burgundy imibala, ngezinye izikhathi ahlahlela ngamakhasha amhlophe noma amhlophe-amhlophe.
Ama-deposit. Izindawo eziyinhloko zokusabalalisa amakhorali yizifunda zaseNdiya nasePacific, i-Coral Sea - indawo eseduze nenyakatho-mpumalanga ye-Australia ne-Caribbean Sea - i-West Indies, i-Bahamas, eFlorida.
Amakhorali atholakala ikakhulukazi ogwini olusenyakatho-ntshonalanga ye-Afrika olwandle lwaseMedithera. Zisakazwe kabanzi ngasogwini lweBay of Biscay ne-Western Mediterranean, iMalay Archipelago, iCanary Islands neJapane. ENyakatho ye-Australia, uLwandle Olubomvu naseMalaysia Archipelago, amakhorali amnyama athathwa.
Isikhungo esiyinhloko sokuhweba kwamakhorali yi-Italy, idolobha laseTorre del Greco, eliseningizimu yeNaples. Amakholomu we-polyp polyps atholakala phansi kuya ku-300 m ukusuka emanzini akhishwa ngamanethiwekhi amanxeba anamangqamuzana amakhulu, adonsela ngasolwandle, aphule ama-coral polyps emhlabathini oqinile, ngale ndlela yezimayini, izinto eziningi ezibalulekile zibhubha futhi zibhubha. Ngemuva kokuba amakhorali ahlanzwa izicubu ezithambile, zihlungwa futhi zithengiswa.
Ngokuyinhloko, itshe lisetshenziselwa ubucwebe, ikakhulukazi i-coral ebomvu ehloniphekile. Kufanelekile ukwazi ukuthi ukugcina amakhorali kuyadingeka ngokucophelela, njengoba bezwela kakhulu emazingeni aphezulu okushisa, okugeza okushisayo nama-acids. Uma igqoke isikhathi eside, zingase ziphele noma ziphele.
Izakhiwo zezokwelapha. I-coral inezindawo ezinhle zokuphulukisa. Ithinta ikrra yomphimbo. Kuwo wonke amazwe, sekukholelwa isikhathi eside ukuthi i-coral ithuthukisa ithoni, ikhulula ukukhathala, iyakwazi ukukuvikela ekuhlangenwe nakho kokukhathazeka nokucindezeleka, ithinta ngokufanele izitho zokubona nokuzwa, futhi ithuthukise inkumbulo. EMpumalanga, abaphulukisi bendawo bavame ukusebenzisa ama-coral emhlophe e-white in fractures, bathi ngenxa yomphumela wokuphulukisa we-coral, amathambo ahlelwa kangcono. I-lithotherapists ikholelwa ukuthi amakhorali anethonya elihle esimisweni senhliziyo, angathuthukisa ukujikeleza kwegazi, anganciphisa ikhanda nokusiza ngomlomo. Amakhorali ombala obomvu anomphumela omuhle ohlelweni lwezinzwa futhi asize ukuqeda ukulala. Ngaphambilini, kwamanye amazwe, amakorali asetshenziswa njengendlela yokukhulelwa. Kuyathakazelisa ukuthi amaRoma asendulo, amaGreki asendulo, kanye nama-naturalist of the Middle Ages and Renaissance ngaphambi kuka-1827 bacabanga ukuthi i-coral iyisitshalo. Ezinsukwini zanamuhla, amakhorali asetshenziselwa ukwelashwa - ahlanze igazi kahle futhi asize ukuhlanza ubuthi, futhi enze nosawoti kubo.
Izakhiwo zemilingo. Izakhiwo zemilingo ze-coral ziye zaziwa isikhathi eside. Phakathi neMinyaka Ephakathi eYurophu kwakubhekwa njengophawu lobuqotho. EGreece lasendulo, bacabanga ukuthi ama-corals anganika isikhathi eside. AmaNdiya aseMexico asekholelwa ukuthi ubuhlalu be-coral bayakwazi ukuxosha imimoya emibi kumuntu othumela umkhuhlane nezinye izinhlekelele. Ngokuvamile, abachwepheshe bahlukanisa amakhorali ngokusho kobulili: ama-reds abhekwa njengabesilisa, futhi abamhlophe bayabesifazane. Ngenxa yalokho, amadoda kufanele agqoke kuphela obomvu, nabesifazane - amakhorali amhlophe kuphela, njengoba i-coral izobahlinzeka labo abagqoke izici zobuntu eziqhathaniswa nobulili bakhe. Izinkolelo-ze zisekhona ezinsukwini zethu, ngokwesibonelo, amaNtaliyane agqoka izikhukhula ezivela ema-corals, ekholelwa ukuthi aziqapheli amehlo amabi, nesiphambano esenziwe ngetshe, sibavikela njengesivikelo nezifo ezithathelwanayo.
Isikhathi esihle sokugqoka imihlobiso yamakhorali yisigaba seNyanga ekhulayo. Ngokuvamile, akunconywa ukugqoka imikhiqizo ngetshe kaningi, ngoba amakhorali athambekela ukwakha abathintekayo izici ezinjalo njengobunqunu, ukungazi kahle kanye nokuzizwa. Ngenyanga ejwayelekile ngokuvamile akunconywa ukuba agqoke ama-corals, ngalesi sikhathi kufanele abanjwe okungenani amaminithi angu-10 ngaphansi kwamanzi asebenzayo, bese ehlanzwa futhi ashiywe angakhanjiswa kuze kube yinyanga entsha.
Ababhula ngezinkanyezi bavumela ukugqoka amakorali kuzo zonke izimpawu ze-zodiac, ngaphandle kweCrayfish neLviv, ikakhulukazi batusa ukuthenga amakhorali ngeCapricorn.
Njenge-talisman, i-coral ilungele abahambi, kukholelwa ukuthi le mineral inikeza ukuvikelwa komnikazi wayo ngezinhlekelele zemvelo nezinye izifo.
Kunokuba uphathe ubuhlungu emhlane nasemisipha?
Ukusetshenziswa kwamafutha abalulekile ehisopi
Izinzwa ezingathandeki ku-anus
Folk, imithi yendabuko kanye nesayensi
Isaladi kusuka emifino
Psychic utshele ngekusasa Tarasov and Kostenko
Mangaki amahora ingane okufanele ilele kuyo
Irayisi yegolide ne-ingulube ne-sage
Hydrotherapy ukuthuthukisa ukujikeleza kwegazi
Indlela yokuxhumana nomntwana oneminyaka engu-4
Indlela yokuziphatha uma kukhona abantu abanomona emsebenzini
Isaladi yamatamatisi othosiwe